Ibandla leMDC-T lithi lanxa likuvuma ukuthi kulemigqa emibi kugwalo lokuguqula isisekelo sombuso welizwe olweConstitutional Amendment Bill No. 2, amalunga alo ephalamende avote esamukela liBill ngoba ilezinto ezinhle ezithuthukisa abesifazana labasakhulayo.
Inengi lisola ibandla leli ngokuvota libambane leZanu PF ekupasiseni liBill, yona epha uMongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba bengazange bavivinywe nguzulu njengalokhu obekusenziwa.
Imupha njalo amandla okuqhelisa ama-contracts abahluleli abayabe sebefikise isikhathi sempentsheni abafana lomahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba yena ozafikisa iminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa, 70, okuyiyo iminyaka abahluleli abamele betshiye ngayo umsebenzi, mhlaka 15 ngenyanga ezayo.
Kulamalunga eMDC-T amane kuphela agoqela uNkosazana Thokozani Khupe avote esala ukwamukela linguquko ebambane labeMDC Alliance ekhokhelwa nguMnu Nelson Chamisa.
Isikhulumeli seMDC-T uMnu Witness Dube utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu lube yinsindabaphenduli kubo kodwa bakubone kufanele ukuthi bayamukele liBill ngoba ilezinto ezinhle.
Kodwa umeli weBinga South edale lephalamende engoweMDC Alliance uMnu Joel Gabuza uthi uvote esala ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu ngoba kunika uMnangagwa amandla amanengi.